तपाईको आज कस्तो छ ? असोज ६, २०७५ शनिबार तथा २२, सेप्टेम्बर २०१८ को राशिफल – tvNepali.net
तपाईको आज कस्तो छ ? असोज ६, २०७५ शनिबार तथा २२, सेप्टेम्बर २०१८ को राशिफल
सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्चपदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं । सद्वुद्धिं च वुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः शुभं शं शनिः ।।
शाके १९४०,विक्रम सम्वत २०७५ साल आश्विन ६ गते शनिवार नेपाल सम्बत ११३८ ञलाथ्व,सन् २०१८ सेप्टेम्बर २२ तारिक शुक्लपक्ष त्रयोदशी तिथि राती ४वजेर ५६मिनेटसम्म उप्रान्त चतुर्दशी तिथि,धनेष्ठा नक्षत्र राती८ वजेर ३ मिनेटसम्म उप्रान्त शतभिषा,धृतियोग,कौलवकरण,आनन्दादियोगप्रवद्र्ध,सूर्य कन्या राशीमा,चन्द्रमा विहान ६ वजेर ४९ मिनेटसम्म मकर उप्रान्त कुम्भ राशीमा ।
आजको शुभ मुहूर्त
विहान८÷५४वजेबाट१०÷२५ वजेसम्म रहनेछ,यमघण्टायोगः–अपरान्ह१÷२७ वजेबाट२÷५८वजेसम्म रहनेछ अशुभ,गुली कालः–विहान५÷५३ वजेबाट ७÷२४ वजेसम्म रहनेछ सामान्य,दूरमुहूर्तः–विहान ७÷३० वजेबाट ८÷१८ वजेसम्म रहनेछ अशुभ । अभिजित मुहूर्तः–पूर्वान्ह ११÷३२ वजेबाट मध्यान्ह १२÷२० वजेसम्म रहनेछशुभ ।
सूर्योदय कालबाट प्रातः७ वजेर २३मिनेटसम्म कालवेला,७ वजेर २३मिनेटबाट ८ वजेर ५४मिनेटसम्म शुभवेला,८ वजेर ५४मिनेटबाट १० वजेर २५मिनेटसम्म रोगवेला,१० वजेर २५मिनेटबाट ११ वजेर ५६मिनेटसम्म उद्वेगवेला,११ वजेर ५६मिनेटबाट १ वजेर २७मिनेटसम्म चरवेला,१ वजेर २७मिनेटबाट २ वजेर ५८मिनेटसम्म लाभवेला,२ वजेर ५८मिनेटबाट ४ वजेर २९मिनेटसम्म अमृतवेला र ४ वजेर २९मिनेटबाट सूर्यास्त कालसम्म कालवेला रहनेछ ।
सूर्यास्त कालबाट ७ वजेर २९मिनेटसम्म लाभवेला,७वजेर २९मिनेटबाट ८वजेर ५८मिनेटसम्म उद्वेगवेला,८वजेर ५८मिनेटबाट १०वजेर २७मिनेटसम्म शुभवेला,१०वजेर २७मिनेटबाट ११ वजेर ५६मिनेटसम्म अमृतवेला,११वजेर ५६मिनेटबाट १वजेर २५मिनेटसम्म चरवेला,१वजेर २५मिनटबाट २ वजेर ५४मिनेटसम्म रोगवेला,२ वजेर ५४मिनेटबाट ४वजेर २३मिनेटसम्म काल र ४वजेर २३मिनेटबाट सूर्योदय काल सम्म लाभ वेला रहनेछ ।
समयले साथ दिनेछ कुनै काम गर्न पछि नपर्नु होला । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । राजनैतिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । नोकरीमा पदोन्नति हुनसक्छ । थोरै मेहनत गरेमा बक्यौता रकम उठाउन सकिनेछ । पढाई लेखाईमा सामान्य प्रगति हुनेछ । सहयोगी मन भेटिने छन् । आफुमा भएको उर्जाको राम्रो प्रयोग गर्नु होला ।
दिन सामान्य अनुकुल देखिन्छ । रोकिएका योजनाहरु अगाडि बढ्ने छन् । थोर प्रयत्न गरेमा नयाँ कामको अवसर प्राप्त हुनेछ । सज्जनको संगत हुनेछ भने दूर्जनहरु टाढा हुनेछन् । पथ प्रदर्शक भएर काम गर्नु पाईनेछ । इज्जत प्रतिष्ठा बढ्नेछ । अध्ययन अध्यापन कार्यमा सफल हुुनुहुनेछ । व्यापारमा सुधार आउनेछ ।
बोलीको स्थायीत्व नहुदा अरुले कम विश्वास गर्नेछन् । विना उपलब्धिका काममा समय बढि लगानी हुनेछ । घर परिवारका कुराले मनलाई बढि अशान्ति गराउनेछ । आर्थिक कारोवारमा बढि चनाखो हुनुहोला । यात्राको सम्भावना देखिन्छ । राजनैतिक शक्ति प्रयोग गरेर दुख दिन सक्छन् होशियारी अप्नाउनु होला ।
शारीरिक एवं मानसिक रुपमा काम गर्न असक्षम महशुस हुनेछ । मनमा वैराग्य भाव पैदा हुनेछ । काम गर्ने वातावरण खलबलिनेछ । अनावस्यक काममा समय र धन खर्च हुनेछ । व्यापार व्यवसायमा अवनति हुनेछ । दिर्घकालीन असर पुग्ने खालका योजना अगाडि नबढाउनु होला । झुट्टा आरोप लाग्न सक्छ सतर्क रहनु होला ।
बोलीको प्रभावबाट काम बन्ने छन् । वैदेशिक कार्य योजनले मुर्तरुप लिनेछ । प्रयत्न गरेमा नयाँ काम हात पार्न सकिनेछ । आयात निर्यात व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । विदेश यात्राको योग देखिन्छ । दामपत्य जीवनमा सुखानुभूति हुनेछ । राजनीति दाउपेचमा नलागी काम गर्नु होला । पढाईमा प्रगति हुनेछ ।
आफ्नो विचारमा अडिग रहेर काम गर्नुहोला अवस्य पनि सफलताको सिढी चढ्नु हुनेछ । संघर्ष विना कहि कतै केहि हुने छैन । परिश्रमको अन्तिम परिणम भने सुखद रहनेछ । विरोधीको सक्रियताले काममा असर पर्न सक्छ सजग भई काम गर्नु होला । आर्थिक क्षेत्रमा सामान्य सुधार आउनेछ । सहयोग पाईने छैन ।
शैक्षिक प्रतिष्ठानमा काम गर्नेहरुको लागि दिन थोरै अनुकुल रहनसक्छ । काम गर्दा अलमलमा नपरि गर्नु होला । आफुले ढिलो गर्दा अरुले फाइदा लिनेछन् । दैनिक काम काज सुचारु रुपले अगाडि बढ्ने छन् । पारिवारिक समस्यामा कमि आउनेछ । भौतिक सुखानुभूति भने कम हुनेछ । साथी भाईको सहयोग कमै मिल्नेछ ।
घरमा जमघट बढ्नेछ र पारिवारिक खर्च पनि बढ्नेछ । भौतिक सुखानुभूति कम हुनेछ । उपलब्धिका काममा समय कम खर्च हुनेछ । शारीरिक शिथिलता बढ्न सक्छ । व्यापार व्यवसायबाट सोचे जस्तो मुनाफा लिन सकिने छैन । ऋण लगानी गर्दा विशेष ध्यान दिनुहोला । भय आतुरमा गरेका काम विग्रिने छन् ।
सफलताको साचो आफ्नै हातमा हुनेछ । आर्थिक उन्नतिको दरमा वृद्धि हुनेछ ।सक्रिय भएर काम गर्दा उपलब्धि राम्रै हात लाग्नेछ । शैक्षिक,न्यायिक तथा बैदेशिक कार्यबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ । अर्थ अभावले काममा सामान्य ढिला सुस्ति हुनसक्छ । इष्टमित्र आफन्तको भर परेर कुनै काम नगर्नु होला यदि गरेमा डुविनेछ ।
अस्थिरताले कमजोर बनाउने छ । रिस,अहंकार र क्रोध त्यगेर कर्म क्षेत्रमा लाग्नु होला । प्रयत्नपूर्वक गरेका काम सफल हुनेछन् । साझेदारीमा गरेका कामबाट कमै लाभ लिन सकिनेछ । व्यापार व्यवसायबाट सामान्य आम्दानी हुनेछ । धन दिने काम भने आज नगर्नु उचित हुनेछ । सहयोग कमै भेटिने छन् ।
प्रातकाल त्यति अनुकुल देखिन्न । मध्यान्ह देखि समयले साथ दिनेछ । कार्य लगनशिलता,आत्मबल,आत्मविश्वास बढ्नेछ । अधिकाँश काम आफ्नै बाहुबलमा सम्पादन हुनेछन् । स्वतन्त्र व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन बढ्नेछ । पढाईमा भन्दा कमाईमा ध्यान जानेछ । राजनीति व्यक्तिसँग सहकार्य नगर्नुहोला पछि धोका हुनेछ ।
अनुदारबादीको चपेटामा परिएला । झुट्टा आरोप लाग्न सक्छ सतर्क रहनुहोला । नयाँ व्यवसायिक क्षेत्रमा लगानी नबढाउनु होला डुब्न सक्छ । आम्दानीका मार्गमा अवरोध आउनेछ । व्यापार घट्नेछ । पारिवारिक सुखमा कमि आउनेछ । पढाईमा कम ध्यान जानेछ ।सहयोगी मनहरु टाढा हुनेछन् । व्यर्थको घुमाई फिराई बढि हुनेछ ।
राशीफलमा जे लेखिएको भए पनि आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्नुहोस्, कर्मशील मानिसका अगाडी भाग्य पनि सकारात्मक बन्छ ।
PreviousPrevious post:अरबी गायकले नारायण गोपालको गित गाउनुको कारण यस्तो रहेछ….
Next Next post:२ बर्ष पछि पहिलो पल्ट दाह्री काटेका मेस्सी यस्ता देखिए, बाहिरिएका तस्विरहरु सहित